August 2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Aung Kyaw shared မဟာဂန္ဓာရုံ's photo.
နောင်တတစ်ဖန် ပူပန်ခြင်းသဘောသည် “ကုက္ကုစ္စ”တည်း။ ထို့ကြောင့် “ကုက္ကုစ္စကား၊ နောင်တစ်ဖန်၊ ပူပန်ထန်ပြင်း”ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ချဲ့ဦးအံ့-ဤကုက္ကုစ္စ၏ နောင်တရမူသည် အကုသိုလ်ပြုပြီးမှ “ပြုမိတာ မှားလေစွ”ဟုလည်းကောင်း၊ ကုသိုလ် မပြုခဲ့မိ၍ “မပြုမိတာ မှားလေစွ”ဟု လည်းကောင်း နောင်တရခြင်း ၂-မျိုးရှိ၏။
Ko Ko Waizayantar's photo.
လိုတိုင်းတပြီး ရခဲ့တဲ့ သူတွေကို
တွေးကြည့်မိတယ် . .
အလုပ်ဖြစ်နေဆဲအိမ်မြေဈေးများ Illegal Land Transfer -
Posted by ၀တ်မှုန် on August 31, 2013 at 12:00am
ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပါ။ အသက်ကြီးလာလို့ဟုထင်ပါသည်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်ပျက်အများစုမှာ ကြေနပ်တာစရာများပါသည်။ အခုကိစ္စကိုတော့ အချိန်ယူ (နှစ်နဲ့ချီပြီး) ရှင်းရမဲ့ကိစ္စဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော၂နှစ်က အိမ်မြေဈေးနှုန်းအဆမတန် တက်သွားခြင်း အကြောင်းဖြစ်သည်။
August 31, 2013 at 6:56am
လူတိုင်းဟာ စိတ်ထားကောင်းရင်ကံကောင်းမယ် ဆိုတဲ့အဆိုကို လက်ခံယုံကြည်ကြ ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ကျန်ဘာသာများမှာလည်းစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားကြရန် ဆုံးမသွန်သင်ထားသည်များရှိပါတယ်။ မည်သူမဆို မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ထားမကောင်းသူ စိတ် ပုတ် စိတ်ယုတ်ရှိသူလို့ထင်မထားကြပါဘူး တခါတစ်ရံတော့ ငါတို့ကတော့ဘယ်သူ့ လောက် တော့ စိတ်ထားမကောင်းနိုင်ဘူး ဘယ်သူကတော့ငါ့ထက်စိတ်ကောင်းတယ်လို့ နှိုင်းယှဉ်ပြော ဆိုမှု တော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းကလူတိုင်းသည် မိမိကိုယ်ကို စိတ်ထားကောင်း သူများအဖြစ် သာတွေးထားလေ့ ရှိတတ်တာပါပဲ။
ABC သင်ပေးတဲ့ဆရာမ အရမ်းတော်
Author: lubo601 | 9:12 PM | No မှတ်ချက် |
ဂျပန်ပြည်မှ စေတီပုထိုး ပုံသဏ္ဍာန်များ
Author: lubo601 | 6:20 PM | No မှတ်ချက် |
August 31, 2013 at 7:25am
အိန္ဒိယပြည် Madhya Pradesh ရှိ Sanchi (ဝါ) သန္တိစေတီ Sanchi Stupa from Eastern gate, Madhya Pradesh source wiki
ကျွန်တော်တို့သည် စေတီဟုကြားလိုက်ရုံဖြင့် ဘယ်လိုပုံဟန် ရှိသည်ကို တန်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူပါ (stupa) ဟုကြားလိုက်လျှင် ရုတ်တရက်တော့ ဘယ်လိုပုံဟန်မျိုးကို မသိနိူင်သေးဘဲ တွေဝေမိတယ်။
တကယ်တော့ ထူပါဆိုသည်မှာ စေတီ၏ အစပင်ဖြစ်ပါသည်။
Miss Myanmar ခင်ဝင့်ဝါ ပရိသတ်ပေးတဲ့ မဲ ၂ သိန်းကျော်ရပြီ
Author: lubo601 | 6:18 PM | No မှတ်ချက် |
Miss Supranational 2013 ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါဟာ လက်ရှိအချိန် အထိ ပရိသတ်ပေးတဲ့ မဲအများဆုံး ၂ သိန်းကျော်နဲ့ ရှေ့ဆုံး တန်းမှာ ပြေးနေပါတယ်။
ကဏန်းနှင့် မိအေးကို သဘောမပေါက်လျှင် လောကတွင် နိုင်ငံရေး လုပ်လုပ်၊ စီးပွားရှာရှာ၊ ပညာယူယူ ပေါက်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်။ ကဏန်းနှင့် မိအေးကိုမသိသောသူ များ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလျှင်၊ နောက်လိုက်ထဲတွင် များနေလျှင် တိုင်းပြည်၊ အဖွဲ့အ စည်း ရှေ့မတက်နိုင်။ နောက်ပြန်လန် မကျလျှင်ပင် ကံကောင်းဟု ပြောရမည်။
*တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးအခေါ်များ in stores now*
Author: lubo601 | 5:57 PM | No မှတ်ချက် |
Bart Kmk shared Bart Kmk's photo.
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု လူချွန်လူကောင်း - Don Wareru
Mediafire - http://www.mediafire.com/listen/jizrbpqt7xfyde8/11.21st_Century_Lu_Chun_Lu_Kg.mp3
Author: lubo601 | 4:51 PM | No မှတ်ချက် |
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ချဉ်းကပ်မှုမမှန်ခြင်း အပိုင်း (၁) စာကြွင်း သုံးပုဒ်
August 31, 2013 at 11:48am
(ဖေ့စ်ဘုတ်၏ စာမျက်နှာ အကန့် အသတ်ကြောင့် စာရေးသူ၏ ဆောင်းပါးကို ဖြန့် ချီရာတွင် အဆုံးသတ်မထားကြောင်း မိတ်ဆွေများ သတိပေးမှ သိရပါသည်။ စာပုဒ် နှစ်ပုဒ်ကျော် ကျန်နေခဲ့သည်ကို ယခုမှသိရှိသဖြင့် ထပ်မံဖြန့် ချီလိုက်ပါသည်။)
နောက်တနေ့ တကယ်တန်းဟောသည့်အချိန် ဦးရွှေအုံးအလှည့်ရောက်သောအခါ ဖက်ဒရယ်ကို စတင်ဟော၍ နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ် ခန့်အကြာမှာပင် ပရိသတ်အတွင်းမှ စီစီညံညံ အသံများထွက်လာသည်။ “လာပြန်ပြီ လားကွ ခွဲထွက်ရေး” “အခုက ခွဲထွက်ရေး လုပ်ရမယ့် အချိန်မဟုတ်ဘူး။” “ဒီမိုကရေစီရေးကို တောင်းဆိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ဖက်ဒရယ်ကို တောင်းနေရင် ရှုတ်ကုန်မယ်” ဟု ရေရွတ်လျှက် ပရိသတ်အမြောက်အများ ကွင်းထဲမှ ထပြန် သွားကြသည်မှာ စာရေးသူ၏ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်ခဲ့သနည်း။
တွေးတွေးပြီး ပြန်ရီရတဲ့ ဟာသတစ်ပုဒ်
Author: lubo601 | 4:16 PM | No မှတ်ချက် |
ကျွန်တော့်ဘဝဟာ သိပ်ကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ချစ်သူ့ လေးနဲ့ ချစ်သူသက်တမ်း ၁ နှစ်မှာပဲ မိဘတွေပြောပြီး လပ်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ .. ပြဿနာက လက်မထက်ခင် ၁ ပတ်လောက်အလိုမှာ စတွေ့တာပဲ။
Miss Myanmar Supranational 2013 - Khin Wint Wah
Author: lubo601 | 4:15 PM | No မှတ်ချက် |
A loanword isaword borrowed fromadonor language and incorporated intoarecipient language.
မြန်မာ အသံ ဖလှယ်ခြင်း
ဘာသာ မပြန်နိုင်သေးလျှင် မြန်မာစာလုံးဖြင့် အောက်ပါနည်းများအတိုင်း အသံလှယ်သည့် အစဉ်အလာ ရှိပါသည်။
(၁) အဆုံးဗျည်းသံ မပါသော စကားလုံးများကို အနီးစပ်ဆုံးကြားသည့် အသံအတိုင်း မြန်မာစာလုံးဖြင့် ရေးခြင်း။
computer ကွန်ပျူတာ (ကွန်ပျူတာ)
Author: lubo601 | 4:03 PM | No မှတ်ချက် |
ဦးဝင်းချို နှင့် လယ်သမား (၆)ဦးအား ပုဒ်မ-၅၀၅(ခ)ဖြင့် ပဲခူးတွင် ဖမ်းဆီးအရေးယူ
အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်သည့်ဥပဒေ ဆော်ဒီတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ပြ ဋ္ဌာန်း
ဒလကျန်စစ်သားရပ်ကွက် အမှိုက်ပုံ ဧရိယာရှိ ကျူးကျော်များအား ဘူလ်ဒိုဇာဖြင့် ရှင်းမည်
ကျောင်းသစ်ဆောက်လုပ်ပေးသော်လည်း စာသင်ခုံ မရှိ၍ ကျောင်းသားများ အခက်ကြုံ
ပြည်နယ်တရားသူကြီးကို အယုံအကြည် မရှိကြောင်းအဆို ပြည်နယ်လွတ်တော် အမတ်များ တင်သွင်း
ယာဉ်မောင်းနှင့်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များမှ အကျင့်ပျက်ယာဉ်ထိန်းများအား အရေးယူစေလို
အရောင်းအဝယ် အေး၍ ကားဈေးကျ
ပဋိပက္ခများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားပါက နိုင်ငံအပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ဖိလစ်ပိုင်မှာ အမြဲတပ်စွဲထားဖို့ အမေရိကန် စိတ်မဝင်စား
Author: lubo601 | 3:58 PM | No မှတ်ချက် |
Miss ခင်ဝင့်ဝါကို vote ခနခနပေးဖို့နည်းလမ်းတွေ့ရှိပါပြီခင်ဗျ။
Posted by မူကြိုဆရာ on August 30, 2013 at 19:42
အရင်ဆုံး Mozilla Firefox browser ကိုဖွင့်ပါ။
ကိုသွားပါ။ Голосов 311577 ကိုနှိပ်ပြီး vote ပေးပါ။ပြီးရင် KeyBoard က Ctrl + H ကိုနှိပ်ပါ။ Firefox ဘယ်ဘက် ဘေးမှာ History box ပေါ်လာပါမယ်။ View ကိုနှိပ်ပြီး By Last Visited ကို နှိပ်ပါ။ အဲ့မှာ Myanmar Khin Wint Wah... ဆိုတဲ့ website အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေပါမယ်။
Author: lubo601 | 5:47 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 5:39 PM | No မှတ်ချက် |
ဂျပန်တွေရဲ့ ရာဇဝင်ပုံပြင်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။
ရှေးရှေးတုန်းက ဂျပန်တံငါတွေ ငါးရှဉ့်ဖမ်းထွက်ကြတော့ သူတို့ရဲ့လှေကသေးတာကြောင့် လှေဝမ်းထဲ ဖမ်းရထားတဲ့ ငါးရှဉ့်တွေဟာ ကမ်းမကပ်ခင် သေကုန်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တံငါတစ်ဦးရဲ့ လှေ အပြင်အဆင်တွေက တစ်ခြား တံငါသည်တွေရဲ့လှေနဲ့ တူတယ်ဆိုပေမယ့် သူဖမ်းရတဲ့ ငါးရှဉ့်တွေက ကမ်းကပ်တဲ့အထိ မသေဘဲ ရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်။
Author: lubo601 | 5:34 PM | No မှတ်ချက် |
နယ်စပ်မြို့လေး တမြို့ရှိ အိမ်တအိမ်တွင် အရမ်းရှက်တတ်သော အပျိုကြီးညီမ နှစ်ယောက်နေထိုင်သည်၊
အဲဒီ ညီမနှစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ရှက်တတ်သလဲ ဆိုရင် လူမှန်းသိတတ်ချိန်မှစပြီး သူစိမ်းတွေ နဲ့လဲ ဆက်ဆံမှုနည်းပါပြီး ယောကျာင်္းလေးများနဲ့လဲ အကျွမ်းတ၀င်သိပ်မရှိပဲ အိမ်ထဲမှာတွင်သာ အနေများကြလေသည်။
Author: lubo601 | 5:28 PM | No မှတ်ချက် |
လူတစ်ယောက်ဟာ ချစ်ခင်မှုနဲ့လေးစားမှုကို တပြိုင်နက်တည်း ရရှိနိုင်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူး ..
လူတိုင်းမှာ ဘ၀ဆိုတာ ရှိကြစမြဲဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ဘ၀ကို ခိုင်ခိုင်မတ်မတ်မဖော်ဆောင်နိုင် ရင် လေးစားမှုရရှိဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. ချစ်ခင်မှုဆိုတာကတော့ ရဖို့ လွယ်ကူကောင်း လွယ်ကူနိုင်ပါတယ် ..
နိုင်ငံသား မဟုတ်သူများ မဲပေးခွင့် ဥပဒေ ပယ်ဖျက်တော့မည်
လင်း သက် and KhingKhing Su shared Myanmar Journal's photo.
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကြမ်းအား ပြင်ဆင်၍ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုနိုင်ပါက နိုင်ငံသား အစစ် မဖြစ်သူများသည် နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်၊ မဲပေးခွင့် ရရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
Author: lubo601 | 5:23 PM | No မှတ်ချက် |
Thanlay Ko's photo.
စစ်သားလေးတစ်ယောက် တပ်တွင်းဆေးခန်းမှာ ဆေးမှူးဗိုလ်ကြီးကို လာတွေ့တယ်....
'ပြော ရဲဘော်၊ ဘာဖြစ်လဲ'
'ည ည အိပ်မပျော်လို့ ဗိုလ်ကြီး'
'ဒါများ လွယ်လွယ်လေး၊ ငါပြောသလိုလုပ်'
" ၀ဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာ အပ "
Author: lubo601 | 5:18 PM | No မှတ်ချက် |
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအများ ပြောဆိုသုံးနှုန်းလေ့ရှိကြသည့် မကောင်းမှု အကုသိုလ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတိပေး ပြောဆိုမှု စကားများတွင် “၀ဋ်လိုက်တတ်တယ်၊ ၀ဋ်လိုက်လိမ့်မယ်၊ ငရဲကြီးမယ်…” စသည်ဖြင့် ပြောဆိုကြသည့် စကားများ ရှိ၏။
Author: lubo601 | 5:17 PM | No မှတ်ချက် |
August 29, 2013 at 4:30am
ဆန့်ကျင်ဘက် အတိုက်အခံ မရှိဘဲ တစ်သွေးတည်း၊ တစ်သံတည်း၊ တစ်ခုတည်း ရှိနေလျှင် မည်သည့် အခါမှ တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းရှိလိမ့်မည် မဟုတ် ပေ။ မိမိ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုထဲမှာ ပင်လျှင် အကောင်းရော၊ အဆိုးရော၊ ဆုတ်ယုတ်မှုရော၊ တိုးတက်မှုရောအမြဲ ဒွန်တွဲနေတတ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် အတွေ့အကြုံနှင့် လက်တွေ့ ဖြစ်ပေါ်မှု မှနေ အမှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လိုသလိုသုံးဖို့ ထင်သလို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြမည်လား
August 28, 2013 at 11:53pm
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း သတင်းသမားတွေအကြိုက် လွှတ်တော်က စီစီညံညံ အသံတွေကြားနေရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် Constitution ကို ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရပြီး ၁၉၇၄ Constitution နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် Constitution ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံ ခံစားခဲ့ရတာမို့လို့ ဥပဒေပညာသင်ကြားခဲ့ရသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သုံးသပ်ဆင်ခြင် ကြည့်ရာမှာ
Author: lubo601 | 5:15 PM | No မှတ်ချက် |
လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဆီးရီးယားကို စတင်တိုက်ခိုက်ဖွယ် ရှိကြောင်း ပြင်သစ် ပြောကြား
အထီးကျန်သက်ကြီး ရွယ်အိုများ အတွက် နေ့ပိုင်း စောင့်ရှောက်မှု ဂေဟာ ဖွင့်ရန်စီစဉ်
အမျိုးသမီး၏ပါးကို ဓါးဖြင့် ခြစ်ခဲ့သည့် တရားခံများအား (၃)ရက်အတွင်း ဖေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ
သြဂုတ်လ (၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာတောင်သူကြီးများ ဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ် (၆၀)
သြဂုတ်လ (၂၇)ရက်နေ့ ထုတ် ၇ရက် ဈေးဝယ်လမ်းညွန် ဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ် (၃)
သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့် အပတ်စဉ်သတင်းစာ အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၅)
သြဂုတ်လ (၃၀)ရက်နေ့ ထုတ် Auto World Journal Vol2Issue 32
တိုက်နယ် ဆေးရုံ (၂) ခုတွင် ဆရာဝန် မရှိ၍ ရမ်းဗြဲတွင် တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြ
ဆေးရုံတွင် ဆရာဝန်မရှိ၍ လူနာများ ဆေးကုသရန် အခက်အခဲဖြစ်
ကျောင်းတော်ကြီးက သင့်ဘဝကို အာမခံပေးနိုင်ပြီလား
Author: lubo601 | 5:12 PM | No မှတ်ချက် |
Cloud Cuckoo Land shared TechSpace Journal's photo.
Mashable မှာ What Your College Degree Will Be Worth After 20 Years ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်း ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ဖတ်ဖြစ်လိုက်လို့ပါ။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်မှာတင် မကပဲ နိုင်ငံတကာမှာ ဘွဲ့ရ၊ ဒီဂရီရ လူငယ် များလည်း အလုပ်အကိုင် အခွင်အလမ်းပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့နေရတာကို တပ်အပ်သိမြင်လိုက်ရပါတယ်။
ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည် sharedaphoto.
လူငယ်တွေရောက်လာ စကားပြောကြတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ဘာလိုနေလဲ။ ဘာတွေကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးလေ့ရှိကြတယ်။ သူတို့ကို ဝေဖန်ပါ၊ ထောက်ပြပါလို့ ပြောတဲ့ သဘောဆောင်တဲ့ အတွက် ၀မ်းသာရပါတယ်။
Author: lubo601 | 9:50 PM | No မှတ်ချက် |
ကျွန်တော်တို့ခပ်ငယ်ငယ်အရွယ်တုန်းက အခြေခံပညာမူလတန်းသင်ရိုး မြန်မာစာဖတ်စာစာအုပ်ထဲတွင် “ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောကျီး” ဟူသည့် စာတစ်ပုဒ် ပါဝင်ပါသည်။ စာသင်သားကလေးငယ်တို့အကြိုက် ပုံပြင်ကလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရုံသာမက ကျောင်းပရိဝုဏ်အပြင်ဘက်က လူတွေဖတ်လည်း တပြုံးပြုံးနှင့် သဘောကျသွားကြရသည့်ပုံပြင်ကလေးပဲဖြစ်ပါသည်။
-မြန်မာဆန်ဆန် ၀တ်ဆင်နေထိုင်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ-
လက်ခံရင် Like & Share
၁။ မြင်သူတကာ စိတ်ကြည်နူးမှုရရှိခြင်း
၂။ အိနြေ္ဒကြီးသူအဖြစ် လူလေးစားဖွယ် ဖြစ်ရခြင်း
၃။ အထင်သေး အမြင်သေး လူကြည့်ခံရခြင်းမှ
၂+၂ = ဘယ်လောက်ဖြစ်စေချင်သလဲ
Author: lubo601 | 8:57 PM | No မှတ်ချက် |
August 29, 2013 at 3:28pm
ဒီနေ့ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးနေရင်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခု ကြည့်ရတယ် ။ ဗီဒီယိုလေး နာမည်က ၂+၂=၅ သို့မဟုတ် အမှန် နဲ့ အမှား ပေါ့ ။
ဗီဒိယိုလေးမှာ ရိုက်ပြထားတာ က စာသင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာ စာသင်ဖို့အတွက် ကျောင်းသားငယ်လေးတွေ လကစောင့်နေတယ် ။ ဆရာကစာသင်ဖို့ဝင်လာတယ်။
မြန်မာ့ကြွေးကြော်သံ ( မေသက်ထားဆွေ )
ခင်ဝင့်ဝါသို့ ပေးစာ .....
Author: lubo601 | 8:41 PM | No မှတ်ချက် |
ချစ်ရတဲ့ စိတ်ကူးထဲက ဇနီးလောင်းလေး ခင်ဝင့်ဝါ........
မင်းရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီး "ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးလား..?" လို့ မေးတဲ့ ငတိတွေရော ငတိမတွေကိုပါ ကိုကိုပြွတ် နရင်းရိုက်ချင်တယ် ခင်..... ခင်က တော့ အားကျိုးမာန် တက် နိုင်ဂျံဂါးဆိုတဲ့ နေရာတွေမှာ နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာတော့...... ကိုကိုပြွတ်က Miss International ပွဲနဲ့ ရွာဘုရားပွဲ မော်ဒယ်ရှိုး မတူတဲ့အကြောင်း ဘကြီးတော်ဘုရားလက်ထက် ကလူတစ်ချို့ကိုလက်လှမ်းမှီသလောက် ရှင်းပြနေပါတယ်ကွာ....
Sa Maung shared 7Day News Journal's photo.
အချိန်က နေ့လယ် ၂ နာရီထိုးခါနီးပြီ။ နေက အတော်ပင်ပူပါသည်။ ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာ ငါးပိုက်ဆွဲနေသည့် တံငါသည်များကို ကျွန်တော်နေပူပူထဲတွင် ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်နေသည်။ ကမ်းခြေတွင် ပိုက်ဆွဲနေသူများကတော့ ဘယ်လိုရှိသည်မသိ။
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့် အမုန်းတရားပေါ်ပေါက်စေသော ပြောဆိုမှု တို့အား ဒဿနိကဗေဒရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်း
“ကျွန်ုပ်မှားပြီး၊ သင်မှန်ချင်မှန်ပါလိမ့်မယ်။ အမှန်တရားနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းကြည့်ရအောင်ပါ”
(၂၀၀၇) ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ အမုန်းတရားပေါ်ပေါက်စေသော ပြောဆိုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အရေးယူအပြစ်ပေးလို့ရတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တရပ်ကို ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီက ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
သတိ ဗိဿနိုးနတ်မင်းကြီး အိပ်နေသည်
Author: lubo601 | 8:31 PM | No မှတ်ချက် |
လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားတိုင်း လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ဖတ်စရာမှတ်စရာ တစ်ခုခုရတတ်ပါသည်။ နံနက်စောစော ထထပြီးပျံတတ်ကြသည့် လေယာဉ်ပေါ်၌ လေယာဉ်မယ်ကလေးများက သတင်းစာ ပူပူနွေးနွေးကို ဗန်းကလေးများပေါ်တွင်တင်လျက် ခရီးသည်များကို လိုက်လံပေးဝေ တတ်ပါသည်။
Way Min's status.
(၄၆၉-၃၉၉ ဘီစီ ကာလက ဂရိမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ အတွေးအခေါ် ပညာရှင်) ဆိုကရေးတီးဆီကို မိတ်ဆွေ တစ်ဦး အပြေး ရောက်လာပြီး ယခုလို စကားဆိုပါတယ်။
မိတ်ဆွေ - ဆရာ... ဆရာ့ကို ဟိုလူ့အကြောင်း ပြောမလို့
ဆိုကရေးတီး - နေအုံး၊ မိတ်ဆွေ အဲ့ဒီ စကားမပြောခင် ကျွန်တော့ မေးခွန်း သုံးခုကို အရင်ဖြေပေးပါလား.
မိတ်ဆွေ - ဟုတ်ကဲ့.
ဆိုကရေးတီး - ခင်ဗျားပြောမဲ့ စကားတွေက အမှန်တရားလား..
ဟုန်ရှင်းအအေးခန်းစက်ရုံ အလုပ်သမားအရေး ခုံသမာဓိရုံးအထိ တက်ရောက်ဖြေရှင်းမည်
ကျေးလက်တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းဘဏ်စနစ် ၀န်ဆောင်မှုပေးရန် စီစဉ်
အစိုးရချပေးသည့် ဆင်းမ်ကတ် မှောင်ခိုဈေးကွက် ကြီးထွား
တရားမဝင် လုပ်သားများကို မလေးရှားအာဏာပိုင် အကြီးအကျယ် နှိမ်နင်းမည်
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကာယဗလ မောင်နှင့် ကာယ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
ရခိုင်ဒေသ ငါးအထိ အမိနည်းလာအောင် ဘယ်သူတွေ ဖန်တီးနေလဲ
ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် ရတစ်ချက် မရတစ်ချက်
မိုင်းလားတွင် မြေပြို၊ ကားလမ်းပျက်စီး
ကျပ်သိန်းရှစ်ရာကျော်တန်းဖိုးရှိ တရားမဝင်ဟန်းဆက်နှင့်လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ ရန်ကုန်လေဆိပ်နှင့်မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်းတွင် ဖမ်းမိ
ဦးပိန်တံတား ပျက်စီးနေ၍ ဧည့်သည်များအတွက် စိုးရိမ်နေရ
Author: lubo601 | 9:49 PM | No မှတ်ချက် |
August 28, 2013 at 6:38am
ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးက ကျားထက်ဆိုး ဆိုသကဲ့သို့ တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ အသွင်ကူးပြောင်း ရောက်ရှိလာသော ရဲဘော်များ ဘဝမှာ ထပ်မံ၍ ဖိနှိပ်ခြင်းခံကြရပြန်သည်။ အချို့အသက်ဆုံးရှုံးသွားရခြင်းတွေ လည်း ရှိသည်။ ထွက်လာရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်တွေ ဆိတ်သုန်းပျောက်ကွယ်ကုန်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့်လူ့အခွင့်အရေး ( ၉ ) ဗြဟ္မစုိုရ်တရားကုို လူ့အခွင့်အရေးဖြင့် ချဉ်းကပ်လေ့လာခြင်း ( က )
Author: lubo601 | 9:33 PM | No မှတ်ချက် |
August 28, 2013 at 10:15am
သီလမဂ္ဂင်သည် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလွန်ပင်အရေးကြီးကြောင်း၊ မိမိကုိုယ်တုိုင်တစ်ဦးတည်း၏ သီလစောင့်ထိန်းခြင်းသည် မိမိအတွက်ရော သူတစ်ပါးအတွက်ပါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အေးချမ်းမှုနှင့်လုံခြုံမှုကုိုဖြစ်စေနုိုင်ကြောင်း၊ ထုို့ပြင် လူမှုပြဿနာများပြေလည်ရေးအတွက် ကုိုယ်ကျင့်သီလသည် အသက်သွေးကြောပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုိုယ်ကျင့်သီလကုို စောင့်ထိန်းခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်သော လူမှုပြဿနာများမှကင်းဝေးကာ အပုိုငွေကြေးမသုံးစွဲရဘဲ ငွေကြေးအကုန်အကျပင်သက်သာကြောင်း၊စီးပွါးရေးအတွက်လည်းမထိခုိုက်ဘဲ ဝင်ငွေပင်တုိုးနုိုင်ကြောင်း၊ ကုိုယ်ကျင့်သီလကုိုမစောင့်ထိန်းခြင်းကြောင့် အပုိုလူမှုပြဿနာများကုိုရင်ဆုိုင်ရ၍ မိသားစုစီးပွါးရေးပင်ထိခုိုက်ကာ နောက်ဆုံး နုိုင်ငံတော်၏ ငွေကြေးကုိုပင်ထိခုိုက်နုိုင်ကြောင်းတုို့ကုို အသင်စာဖတ်သူသည် ချဲ့ဆန့်တွေးကြည့်ပါက ကောင်းကောင်းကြီးသိနုိုင်ပေပြီ။
သင်ကြားရေးတွင် စာအုပ်အစား ကွန်ပျူတာနှင့် တက်ဘလက်ပြောင်းသုံးရန်ပြင်ဆင်
လန်ကက်စတာ၊ သြဂုတ် ၂၇
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကျောင်းအများစုတွင် သင်ကြားမှု သင်ယူမှုကို အထောက် အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ကွန်ပျူတာ များနှင့် iPad တက်ဘလက်များကို ပြောင်းသုံး ရန်ပြင်ဆင်နေ ကြကြောင်း ဖဲယားဖီးလ်ဒေသဆိုင်ရာ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း များက ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
(Right to recall) ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့် အခွင့်အရေးလား၊ (Recalling right) အခွင့်အရေး ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံရတာလား။
Athenian Ahnyarthar shared မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများ's photo.
၂၃-၈-၁၃ နေ့က ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တင်သွင်းထားတဲ့`လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း´ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ဖို့ ဆိုင်းငံ့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Miss ခင်ဝင့်ဝါကို vote ခနခနပေးဖို့နည်းလမ်းတွေ့ရှိပ...
ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့်လူ့အခွင့်အရေး ( ၉ ) ဗြဟ္မစုိုရ်တရားကု...
သင်ကြားရေးတွင် စာအုပ်အစား ကွန်ပျူတာနှင့် တက်ဘလက်ြေ...
သေကံမရောက် သက်မပျောက်ခဲ့ရသော လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ တန်ဖိုး
ဆရာတော်ဘုရားက ထမင်းဝါးပြီး ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးက အိပ...
ဘ၀တစ်ခု ဖျတ်ကနဲ လွင့်ပါးသွား
ကျနော်နဲ့ ဂီတသူရဲကောင်းများ (၃)
ရန်သူအမူအရာ (၁၆) ချက်နှင့် မိတ်ဆွေ အမူအရာ (၁၆)
မြန်မာနှင့် ခွေးမဝင်ရ ဆောင်းပါးရေးသူ မရေးခင် ကိုယ်...
ကျနော်နဲ့ ဂီတသူရဲကောင်းများ (၂)
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၅-၈)
စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း ၀ါသနာပါသူများအတွက်...
ဘ၀နေနည်းညွှန်ပြလေသူ (ရေးသူ ဒေါက်တာမြင့်ဦး ပါမောက္ခခ...
(((((..... နူးညံ့စွာ ရှင်သန်ခြင်းအကြောင်း..... )))))
ကျနော်နဲ့ ဂီတသူရဲကောင်းများ (၁)
((((( ..... စောင်းကိုပိုက်၍ ပန်းကိုသီ....)))))
အဆိုတော် ဗဒင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
အရောင်စုံ ပေစွန်းနေတဲ့ရင်ခွင်နဲ့ တေလေတစ်ယောက်ရဲ့ အ...
စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကနေ ရုန်းထွက်နိုင်မယ့်နည်း (၄) နည်း
HIGH QUALITY PHOTO RESIZER (ဓါတ်ပုံတွေ အရည်အသွေး မ...
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်နိုင်ဖို့ တ...
A Man born without arms plays Let It Be.. Tony Mel...
ပျောက်ဆုံးနေသော နိဗ္ဗာန်ဘုံ (လွှမ်းမိုး)
အမေရိကန်ကောလိပ် သိသင့်စရာများ (နိဂုံး)
လက်ထပ်ပြီးသည့်အထိ စောင့်ပါ (or) ဒုတိယမြောက် အပျိုစ...
ရေကြည်ပြီး မြက်နုနေသည့် ရန်ကုန်
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖြစ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင...
"ရင်ချင်းဆက် စွယ်တော်ရွက်များ " (မင်းလူ)
အမေရိကန်ကောလိပ် သိသင့်စရာများ (၂)